Semalt Explained Sida Loo Helo Inta Ugu Badan Kombiyuutarka Iyo Isdhexgalka SEO
Suuq-geynta Macmiilka iyo istaraatejiyadaha raadinta mashiinka waa si adagku xiran iyo marka ay isku habboon yihiin, waxay ka fiicanyihiin PB & J. Labadaas xeeladahaani waxay ku saabsan yihiin siinta dadka si gaar ah waxa ay u baahan yihiin.Si aad u heshid waxyaabaha aad ka heleyso, waxaad u baahan tahay matooro raadin.
Frank Abagnale, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Digital waxay sharraxayaan sida loo sameeyo labadan istaraatiijiyadood ee u shaqeeya, waxay wadaagaan aqoonta maaddooyinka muhiimka ah ee bogga internetka ee ah inay noqotowaxaa loo siman yahay labadaba bini'aadamka iyo matoorada.
Helitaanka ereyada xaqiiqda saxda ah
Maxaad u sameyneysaa tan makiinadaha raadinta: Ereyada ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsanu oggolow bogaggaaga in la helo. Khabiirada Smart Smart SEO baaris ma aha oo kaliya shuruudaha warshadaha ay rabaan inay darajo, laakiin sidoo kale ereyada iyo odhaahdain daawadayaashu ay isticmaali karaan si ay u ogaadaan iyaga. SEOs Smarters waxay kordhinayaan macluumaadkooda ku saabsan jumladaha muhiimka ah ee saddex ama kabadan oo kuwaasisi aan toos ahayn ula xiriirin adeegaaga ama sheygaaga. Tani waxay si weyn u yaraynaysaa tartanka iyo gaadiidka, taas oo ka dhigaysa inay fududdahay in lagu darajo.
Maxaad u samaynaysaa tan dadka: raadinta ereyada muhiimka ah ee dhaadheer waxay leeyihiin dabeecadsi loo badalo hogaamiyaasha iyo iibinta si fiican. Si aad u garaacdid dahabka suuq-geynta, waxaad u baahan tahay inaad heshid dhowr faallooyin oo dhaadheer oo aad u sarreeya.
Helitaanka cinwaanka saxda ah iyo summadaha sharaxaadda
Maxaad u sameyneysaa tan makiinadaha raadinta: Qeexitaanadani maaha sidalagama maarmaan sida ay u isticmaalaan inay ku jiraan liiska, laakiin waxay si aan toos ahayn saameyn ugu yeelan karaan sida aad u kala sareyso. Magac wanaagsan iyo sharraxaad ayaa sare u qaadaysa tirada"muhiima" raadiyeyaasha ka doorta liiskaaga halkan muujinaya tayada. Tani waxay keenaysaa in liisaska la isu rogo safka
Maxaad u sameyneysaa tan dadka: Tani waa xog kaliyamuuqaalka dadka marka la eegayo qaabka liistada. Faahfaahin ah in si sax ah u mataleyso waxyaabaha ku jira boggaaga, iyo kan ku hadlayaujeedada raadinta ee isticmaalaha, waa wicitaan ku saabsan tallaabo ay dadka ku doonayaan inay ku soo galaan boggaaga. Sidan, waxaad soo jiidaneysaa martida khaaska ah ee ogsoonwaxa aad ka filan karto boggaaga
Isticmaalka erayada ereyada iyo kala duwanaanshahooda jirka ee qoraalkaiyo muuqaalka sawirka hoose, mar ama laba jeer mar kale subagitles
Maxaad tan u samaysaa mashiinnada raadinta: Feejignaanta makiinadaha raadintaayaa u wareegay tags. Shaqadan u sameyso adigoo si xariif ah u isticmaalaya ereyada muhiimka ah oo ay ku jiraan kala duwanaanta iyaga. Waa wax walba oo ku saabsan isticmaalkaErayada isku dhejisan
Maxaad u samaynaysaa tan dadka: Dadku waxay leeyihiin dareen-celiniyada oo loo marayo internet ka badan akhrinta. Madax-madaxyadu way weyn yihiin si ay u dhejiyaan waxayna dadka u jiidi karaan inay akhriyaan bog iyaga oo u sahlaya akhrinta.
Iyadoo la raacayo dhammaan wixii kor ku xusan, mawduuca waa inuu noqdaa mid jilicsaninuu soo jiito oo uu sii wado booqdayaasha. Macluumaadka waa in ay ahaataa mid sahlan in la helo si kale haddii la helo wax aan faa'iido lahayn. Labada SEO iyo Content Marketingwaa in uu ka shaqeeyaa xiriirka, tan iyo iyada oo aan content ah in la akhriyo by aadanaha, farsamooyinka SEO waxaa loo tixgelin lahaa sida kaliya spam ah. Markaa awaxyaabaha muhiimka u ah akhrinta iyo wadaagista waa ujeedada ugu muhiimsan ee la xoojiyo Source .